people Nepal » आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल बैशाख २८ गते शुक्रबार आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल बैशाख २८ गते शुक्रबार – people Nepal
आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल बैशाख २८ गते शुक्रबार
Posted on May 11, 2018 May 11, 2018 by Durga Panta
आज श्री शाके १९४० बि.सं. २०७५ साल बैशाख २८ गते शुक्रबार तदानुसार इश्वी सन २०१८ मे ११ तारीख शुद्धज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथी, चन्द्रमा मिन राशिमा, सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, अपरा एकादशीव्रत –
बाणीका कारण सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । मित्रजनको साथ सहयोमा कमि महसुस हुनेछ । सामाजिक कार्यमा समय ब्यतित गरेको खण्डमा सामान्य मान सम्मान प्राप्तीको सम्भाबना रहेको छ । जिवन साथी सगँ सामान्य मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ ।
मित्रजनको साथसहयोग द्वारा नयाँकार्यको थालनिको सम्भावना रहेको छ । अनुसन्धानात्मक कार्यमा समय ब्यतित गरेमा उत्तम रहनेछ । बिद्यार्थी वर्गकानिम्ती समय मध्यम रहेको छ । जिवनसाथीको सहयोगमा प्रतिपक्क्षी परास्त रहनेछन ।
मान्यजनसगँको सम्बन्ध प्रगाड बन्नेछ । ब्यापारब्यवसायमा भने सजग रहनु उत्तम रहनेछ । तपाईको प्रगतिमा आरीस गर्नेहरुको सङख्यामा बृद्यि हुनेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने योग रहेको छ ।
मान्यजनको साथसहयोमा कार्य सम्पादनमा मद्धत पुग्नेछ । प्रिय खवरले मन हर्शीत तुल्याउला । आम्दानि मध्यम रहेतापनि स्वास्थमा भने सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । सबारी साधनको प्रयोगमा साबधानि अपनाउनुपर्ने समय रहेकोछ ।
तपाईको कामको फाईदा अरुलाई मिल्नेछ । मित्रजनहरुको लागी साधारण खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । खराब संंगतको कारणले सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ ।
भोग बिलास को क्षेत्रमा समय ब्यतित हुनेछ । तपाईले कसैमाथी गरेको बिश्वासमा बिश्वसाघात हुन सक्छ । खानपानको गडबढीले स्वास्थमा सामान्य बाधा आउन सक्छ । कार्य सम्पादन गर्न बढी परीश्रम र समय ब्यतित हुन सक्छ ।
साजेदारी काममा हात नहाले कै बेस रहने छ । तपाईका शुभ चिन्तक हरुको सङख्या बढ्नेछ भने शत्रुपक्क्ष कमजोर हुनाले बिघ्नबाधाहरु हट्नेछन् । यात्राकारक दिन रहेकोछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ ।
रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । पठनपाठनको क्षेत्रमा समय मध्यम रहनेछ । सन्तान शुःख प्राप्त हुनेछ । सामान्य चोटपटक सहनु पर्ला । नयाँ कामको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ । यात्रामा सामान्य झन्जट आउन सक्छ ।
खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । ब्यापार ब्यबसायमा रामा्रे समय रहेको छ । प्रिय ब्यक्तिहरु टाढीन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । प्रेमी प्रेमिकाको बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्छ । साजेदारीकार्य बाट बिशेष लाभ मिल्नेछ ।
ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्र भने राम्रो रहेको छ । कुराकाट्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ । सामान्य यात्रा हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । मित्रजनको साथ सहयोग भरपुर रहनेछ । पराक्रम बृद्धि हुने छ ।
दीर्घकालिन फाईदा मुलक काममा लगानि लगाउने राम्रो समय रहेको छ तर तत्कालिक आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । खानपानको गडबढीले स्वास्थमा सामान्य बाधा आउन सक्छ ।
साजेदारी काममा हात नहाले कै बेस रहने छ । शारिरिक आलस्यता ले सताउन सक्छ । साधारण चोट पटक लाग्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । प्रेमी प्रेमीका बिच खट्पट रहने छ । सामान्य यात्राले मन बैचैन रहला ।